Amar Lagu Soo Rogay Shacabka Dalka Uganda - Wararka Maanta: Somali News...
Amar lagu soo rogay Shacabka dalka Uganda – Wararka Maanta: Somali News…
Dadka reer Uganda ayaa wajahaya laba sano oo xarig ah hadii ay jebiyaan sharci cusub oo ay dowladda ka soo saartay xakameynta xanuunka COVID-19.
Sharcigan cusub ayaa dhigaya in qofkii ku tukada banaanka, qofkii aan xiran af-saab ama Mask, qofkii wax ku iibiya banaanka, ama badeeco jidadka ku wareejiya la xirayo laga bilaabo bishan July.
Dowladda Uganda ayaa aaminsan in ficiladan ay yihiin kuwa faafinaya xanuunka COVID-19, iyadoo dalkaasi laga diwaan geliyay in ka badan 1,000 kiis oo cusub.
Muunado dadka laga uruuriyay horaantii bishii tagtay ee June ayaa muujinaya in nooca Corona ee Delta ee markii ugu horeysay lagu arkay India uu yahay midka hadda ku faafaya Uganda.
Markab ay Isra’iil leedahay oo la weeraray – Wararka Maanta: Somali…
Ciidanka Liyuu boolis oo markii ugu horreysay lagu wareejiyay amniga…